Makomo anoputika muIceland: maitiro uye kuputika | Network Meteorology
ChiGerman Portillo | 07/01/2022 11:28 | Geology
Iceland, nyika yeaizi nomwoto, iparadhiso chaiyo. Kutonhora kwesimba remazaya echando uye mamiriro ekunze eArctic ari kupesana nekupisa kwepasi kunoputika. Mhedzisiro yacho inyika ine misiyano inoshamisa murunako rusingaenzaniswi rwenyika yakashata. Pasina makomo eIcelandic, zvose izvi hazvibviri. Simba re makomo anoputika muIceland Inogona kutsanangura chimiro chenyika ino zviri nani kupfuura chero rimwe gomo rinoputika, richigadzira minda isingaperi yakafukidzwa nemoss-yakafukidzwa nemabota, mapani makuru ejecha dema, uye makomo ane mawere uye makoronga makuru.
Naizvozvo, isu tichakumikidza chinyorwa ichi kuti tikuudze zvese zvaunoda kuziva nezve makomo anoputika muIceland uye maitiro awo nekukosha.
1 Makomo anoputika muIceland
2 Pane vangani?
3 Kuwanda kwekuputika
4 Ngozi yekuputika kwemakomo muIceland
Masimba ekuputika kwemakomo ari pasi pevhu akagadzirawo mamwe mashura anozivikanwa munyika, akadai zvitubu zvinopisa zvepanyama uye magiza anoputika. Pamusoro pezvo, mhedzisiro yekuputika kwakapfuura inogona kuoneka mumawere akaumbwa ne sinuous lava mapako uye hexagonal basalt mbiru.
Zviuru zvevanhu zvakadirana kuIceland kuti vaone makomo ayo anoputika nezvishamiso zvavakagadzira uye vanoramba vachigadzira. Munguva yekuputika kwegomo, tinofanira kuva nechido chekuwana mukana ona chimwe chezviitiko zvinoshamisa uye zvinoshamisa pasi pano. Tichifunga kuti zvakakosha kune chimiro cheIsland uye chimiro cheindasitiri uye kunyangwe chimiro chenyika, isu takanyora iyi giredhi rine chiremera kumakomo anoputika eIceland, uye isu tinovimba inogona kupindura mibvunzo yese yaungazvibvunza nezvayo. simba rezvikomo izvi.
MuIceland, kune anenge 130 makomo anoputika uye makomo anoputika. Kune anenge makumi matatu anopisa anoputika masisitimu pasi pechitsuwa, kunze kweWest Fjords, munyika yose.
Chikonzero icho maWest Fjords asisina basa rekuputika kwemakomo ndechekuti ndiyo chikamu chekare cheIcelandic mainland, Yakaumbwa makore angangoita mamirioni gumi nematanhatu apfuura uye kubva ipapo yakanyangarika kubva kuMid-Atlantic Range. Nekudaro, iyo West Fjords ndiyo yega nzvimbo yenyika inoda magetsi kupisa mvura pachinzvimbo chegeothermal mvura.
Chiitiko chekuputika kwemakomo muIceland nekuda kwenzvimbo yenyika yakananga pakati peAtlantic ridge inoparadzanisa North America neEurasian tectonic plates. Iceland ndiyo imwe yenzvimbo shoma pasirese umo murwi uyu unogona kuonekwa pamusoro pegungwa. Aya tectonic mahwendefa akasiyana, zvinoreva kuti vakaparadzana kubva kune mumwe nemumwe. Mukuita kudaro, magma ari mujasi acharatidzika kuzadza nzvimbo iri kugadzirwa uye kuonekwa muchimiro chekuputika kwegomo. Ichi chiitiko chinoitika mumakomo uye chinogona kucherechedzwa pane zvimwe zvitsuwa zvinoputika, seAzores kana Santa Elena.
Iyo Mid-Atlantic Range inomhanya nemuIsland yese, chokwadi chitsuwa ichi chiri kuAmerican continent. Kune nzvimbo dzakawanda munyika ino dzinogona kuonekwa mitsetse isina kukwana, kusanganisira Reykjanes Peninsula uye nharaunda yeMývatn, asi yakanakisisa iThingvellir. Ikoko, unogona kufamba nemumipata pakati pemahwendefa uye kuona zvakajeka madziro emakondinendi maviri kumativi ose epaki yenyika. Nekuda kwekusiyana pakati pemahwendefa, mupata uyu unowedzera 2,5 cm gore negore.
Kuputika kwemakomo muIceland hazvizivikanwi, asi kunowanzoitika nguva dzose. Hapasati pave nemakore gumi kubva kutanga kwemaXNUMX pasina kuputika, kunyangwe mukana wekuti zviitike nekukurumidza kana zvakanyanya kupararira wakasarudzika.
Kuputika kwekupedzisira kunozivikanwa muIsland kwakaitika kuHoluhraun muHighlands muna 2014. Grímsfjall akanyora zvakare kuputika kupfupi muna 2011, nepo Eyjafjallajökull ine mukurumbira yakakonzera matambudziko makuru muna 2010. Chikonzero icho izwi rekuti 'kuzivikanwa' rinoshandiswa Imhaka yekuti fungidziro yekuti kuputika kwemakomo akawanda kwakaitika munzvimbo dzakasiyana dzenyika iyo isina kutyora ice sheet, kusanganisira Katla muna 2017 uye Hamelin muna 2011.
Panguva ino, tyisidziro kuupenyu hwomunhu mukati mokuputika kwegomo muIceland iduku zvikuru. Zviteshi zvekudengenyeka kwenyika zvakapararira nenyika zvakanaka kwazvo pakufanotaura. Kana makomo makuru akaita seKatla kana Askja achiratidza zviratidzo zvekutinhira, kupinda munzvimbo iyi kunorambidzwa uye nzvimbo yacho inotariswa zvakanyanya.
Kutenda kuhana yakanaka yevakatanga kugara, gomo rinoputika zvakanyanya riri kure nenyukiresi inogarwa. Semuenzaniso, kune maguta mashoma pamhenderekedzo yekumaodzanyemba kweIceland, nekuti makomo anoputika seKatla neEyjafjallajökull ari kuchamhembe. Nokuti nzvimbo idzi dzakakwirira dziri pasi pe glacier, kuputika kwayo kuchakonzera mafashamo makuru echando, anogona kutsvaira zvose zviri munzira inoenda kugungwa.
Izvi ndizvo zvinoita kuti kuMaodzanyemba kuite segwenga dema rejecha. Muchokwadi, ibani rakagadzirwa ne glacial deposits.
Ngozi yekuputika kwemakomo muIceland
Nekuda kwekusaziva kwaanoita, mafashamo echando aya, anozivikanwa sejökulhlaups, kana kuti chiSpanish muchiIcelandic, anoramba ari mamwe emativi ane ngozi zvikuru ekuputika kwemakomo muIceland. Sezvambotaurwa pamusoro apa, kuputika pasi pechando hakusi nguva dzose kuonekwa, saka mafashamo aya anogona kuitika pasina kunyeverwa.
Ehe, sainzi inogara ichifambira mberi, uye zvino, Chero bedzi paine kusava nechokwadi kudiki kuti chimvuramabwe chinogona kuitika, unogona kubva uye kutarisa nzvimbo. Nokudaro, nokuda kwezvikonzero zvakajeka, zvinorambidzwa kutyaira mumigwagwa inorambidzwa, kunyange muzhizha kana pazvinenge zvichiita sokuti hapana ngozi.
Kunyange zvazvo makomo akawanda ari kure nenzvimbo dzine vanhu vakawanda, tsaona dzinogara dzichiitika. Mumamiriro ezvinhu akadaro, zvakadaro, matanho eIsland ekukurumidzira aratidza kushanda zvakanyanya, sezvakaonekwa mukuputika kwe1973 kuHeimaey muVestman Islands.
Hemai ndicho chitsuwa chega chinogarwa muVestman Islands, nzvimbo ine makomo anoputika. Pakaputika gomo racho, vanhu 5.200 XNUMX vaigara imomo. Mumaawa apakuvamba aJanuary 22, kuparuka kwakavamba kuvhurika nechokunze kweguta ndokupfuura nomupakati peguta, kuchiparadza migwagwa nokuputira mazana ezvivako zvemabota.
Kunyangwe zvakaitika pakati pehusiku uye mukufa kwechando, kubviswa kwechitsuwa chacho kwakaitwa nokukurumidza uye nenzira inobudirira. Vagari pavakangomhara zvakanaka, zvikwata zvekununura zvakashanda nemauto eUnited States aive munyika kuti aderedze kukuvadzwa.
Nekugara vachipomba mvura yegungwa mukuyerera kwebota, havana kungokwanisa kuidzosera kure nedzimba zhinji, asi zvakare vakaidzivirira kuti isavhare chiteshi chengarava, ichigumisa hupfumi hwechitsuwa zvachose.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve makomo anoputika muIceland uye maitiro awo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Geology » Makomo anoputika muIceland